ကိုဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မပွင့်ဖြူ လတ် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး သား ကိုနှိင်လင်းဦး နှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeကိုဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မပွင့်ဖြူ လတ် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး သား ကိုနှိင်လင်းဦး နှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်
ကိုဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မပွင့်ဖြူ လတ် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး သား ကိုနှိင်လင်းဦး နှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်
U Sann Sint was punished because he was the acting Home Minister at the time of Lashio Anti-Muslim riots. He knew the role of Myanmar Military in that riots and tried to control using the loud-haler in hot-spots. Because he protest and revealed about that in the parliament he was punished.
ကိုဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မပွင့်ဖြူ လတ်တို့ လွတ်လာပါပြီ…….
Thu Rain Nay Lin ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး နှင့်သား ကိုနှိင်လင်းဦး လဲ ပါပါတယ်
၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်
တောင်ငူ၊ မေ ၂၄
သာသာနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်သည် ယနေ့ (မေလ ၂၄ ရက်) နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် တောင်ငူ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
သတင်အပြည့်အစုံဖတ်ရန် >>> https://goo.gl/pyt1mQ
← ဝီရသူကတော့ နိမိတ်ပြစကားတွေနဲ့ ဘုရားအလောင်း မျောက်မင်းလက်ထက်က လူတွေနေတဲ့ရွာကို မျောက်စစ်သူကြီး မီးတိုက်ခဲ့တာကို ပုံပမာ ပြပြီး တိုင်းပြည်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ ပြောသွားပါပြီ
ကဲ ဇ ရှိလား စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့…မဘသအဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းမည်မဟုတ်ဟု ဦးဆောင်ဆရာတော် မိန့်ကြား →
One thought on “ကိုဇော်ဇော်လတ် နဲ့ မပွင့်ဖြူ လတ် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ဦး သား ကိုနှိင်လင်းဦး နှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့် ပြန်လည်လွတ်မြောက်”
ဦးဆန်းဆင့် ဟာ ခေတ္တ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူစဉ်မှာ……..
လားရှိုး အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက်……လားရှိုးကို ကိုယ်တိုင် သွား….
အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း…ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ
လားရှိုးမှာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းစဉ် အတွင်း….လာရှိုးမဘသ ခေါင်းဆောင်
ကုလားဘုန်းကြီး အင်္ဂုရ နဲ့ အဖွဲ့က ခေတ္တ ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုတောင်ခံခဲ့ရတယ်
အဲ့ဒီ အကြမ်းဖက်မှု တရားခံတွေကို အရေးယူဖို့ လုပ်တဲ့ အချိ န်မှာ…….
စစ်တပ်က အကာအကွယ်ပေးထားလို့ ဘာမှ လုပ်မရခဲ့ဘူး…လို့ သိရပါတယ်
ဒါကြောင့်….နေပြည်တော် အစည်းအဝေးမှာ….မိတ္ထီလာပြသနာနဲ့ လားရှိုးပြ
သနာ ကို ဖန်တီးပြီး မဘသ ကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကို အပြစ်တင်
စကားပြောခဲ့ မိလို့….အရေးယူ ခံရတယ်လို့…ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းများရရှိထား
အခု မဘသ အပြုတ်မှာ ဦးဆန်းဆင့် လွတ်လာတယ် ဆိုတော့………
မင်္ဂလာပါဘဲဗျာ………
သာသာနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်သည် ယနေ့ (မေလ ၂၄ ရက်) နံနက် ၈ နာရီခွဲခန့်က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် တောင်ငူ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။